မောင်ရင်ငတေ – ရာဇဝင်ထဲကလူသားများ (မာရီ အန်တွမ်းနက် သို့မဟုတ် ကိတ်မုန့်စားသူကြီး) | MoeMaKa Burmese News & Media
Marie-Antoinette (1775) par Gautier d’Agoty (1740-1786) (Photo Google)
(Marie-Antoinette Josèphe Jeanne de Habsbourg-Lorraine)
ဥရောပသမိုင်းမှာ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ မင်းညီမင်းသား မင်းသမီးတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ ဒီ သြစတြီးယား ဘုရင့် မင်းသမီး Marie-Antoinette d’Autriche မာရီ အန်တွမ်းနက်ရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပုံကတာ့ တမျိုးတဘာသာပါ၊ မာရီ အန်တွမ်းနက် (၁၇၅၅-၁၇၉၃) ကို ဒီကနေ့ သြစတြီးယားပြည်ရဲ့ မြို့တော် ဗီယမ်နာမြို့မှာ သြစတြီးယားမင်းသမီး Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780) နဲ့ ပြင်သစ်ပြည် Lorraine လောရင်းနယ်သား Holy Roman Emperor ရဲ့ ဧကရာဇ် François I (1708-1765) တို့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်လို့ Marie-Antoinette d’Autriche ဆိုပြီး သမိုင်း မှတ်တမ်းတွေမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ပန်းချီဆရာမ Élisabeth Vigée Le Brun အေလီဇဘတ် ဗီဂျေး (၁၇၅၅-၁၈၄၂)
၁၇၈၃ မှာ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ မာရီ အန်တွမ်းနက် ပုံတူပန်းချီ (Photo Google)
မာရီ အန်တွမ်းနက် အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ၁၇၇၀ ခုနှစ်မှာ နောင်တချိန် ပြင်သစ်ဘုရင် Louis XVI လူဝီ ၁၆ (၁၇၅၄-၁၇၉၃) ဖြစ်လာမယ့် ၁၅ နှစ်သား အိမ်ရှေ့မင်းသားကလေးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီ ပြင်သစ် မင်းသားလေးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ မွေးဖွားခဲ့ရာ ဇာတိမြေ ဗီယမ်နာမြို့ကို စွန့်ခွာလာခဲ့ရတာ ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ၃၇ နှစ်အရွယ် (၃၈ နှစ် ပြည့်ဖို့ ရက်ပိုင်း မျှသာလိုပါတော့တဲ့) ၁၆ ရက် အောက်တိုဘာလ ၁၇၉၃ ခုနှစ်အထိ တခေါက်တလေမှ ပြန်လည်လို့ မရောက်ခဲ့တော့ပါဘူး ဆိုကြပါတယ်။ ဗားဆိုင်းနန်းတော် ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုနဲ့ ဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့ လူဝီ ၁၆ ဘုရင်ရဲ့ စွမ်းပကားတွေ ကြောင့်လား သူမကိုယ်တိုင်က မပြန်ချင်တော့လေသလား မသိနိုင်ပါဘူး၊
တကယ်တမ်းတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲဟာ မာရီ အန်တွမ်းနက်ရဲ့ သြစတြီးယား ဟန်ဂေရီ ဘိုဟေးမီးယာ အင်ပါယာကြီးနဲ့ လူဝီ ၁၆ မင်းသားရဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံတော်ကြီးတို့ ချစ်ကြည်စွာ အတူလက်တွဲ နေထိုင်ကြဖို့ ဘုရင့်သားနဲ့ ဘုရင့်သမီးတွေရဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားကြတဲ့ ဓလေ့တွေထဲက ပြယုဂ်တခုသာ ဖြစ်မှာပါ၊ ဒါပေမယ့် လူဝီ ၁၆ မင်းသား မတိုင် ခင် အဘိုးအဘေး ဘုရင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ လူဝီ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ဘုရင်တွေရဲ့ ဗားဆိုင်းနန်းတော်ကြီး အရှိန်အဝါ တောက်ပနေမှုတွေက လျော့နည်းလို့လာနေပြီဆိုတာ မင်းသားလေးနဲ့ မင်းသမီးလေးတို့ သိရှိနားလည်ခဲ့မယ်လို့ မောင်ရင်ငတေ မထင်မြင်မိရ ကြောင်းပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၂၂ နှစ်က အန်တွမ်းနက်မင်းသမီးရဲ့ နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းနေရာ (Photo YYintNaung)
ဗားဆိုင်းနန်းတော်ကြီးနဲ့ အန်တွမ်းနက်မင်းသမီးတို့ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းအဆိုးအကောင်းတွေကိုတော့ ဒီနေရာမှာ အကျယ်တ ဝင့် မရေးတော့ပါဘူး၊ အကျယ်ရေးဖို့လည်း မောင်ရင်ငတေ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ မောင်ရင်ငတေ ရေးချင်တာက အခု ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့ ဆိုရင် အန်တွမ်းနက် မင်းသမီးလေး ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံရတာ နှစ်ပေါင်း ၂၂၂ နှစ် ပြည့်ပါပြီ၊ အဲဒီလို ၂၂၂ နှစ်ပြည့်သွား ခဲ့တာကို မှတ်တမ်းအဖြစ် တင်တယ်ဆိုရုံ တင်ချင်တာပါ၊ ဘာ အရောင်အသွေးမှ မပါပါဘူး၊ ပြင်သစ် မီဒီယာသတင်းတွေထဲမှာလည်း ဘာတခုမှပါသံ မကြားပါဘူး၊ မောင်ရင်ငတေ လက်လှမ်းမမှီနိုင်တဲ့ တနေရာမှာတော့ တခုခု အမှတ်တရ မရှိနိုင်ပါဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး၊ အဲဒါကို စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီ သတင်းတွေဟာ တချိန်က ရွှေထီးဆောင်းခဲ့ သူတွေရဲ့ သတင်းဖြစ်နေပေမယ့် ကံကြမ္မာ ဝဋ်ကြွေးရယ် လို့သာ ပုံချရတော့မယ့် အမေ့ခံသတင်းတွေ ဖြစ်လို့သွားခဲ့ပါပြီ၊ ဘယ်သူတွေကမှ အဖက်လုပ် အရေးတယူမရှိတော့တဲ့ သတင်းအတိုအစတွေသာ ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
ဒီကနေ့ Place de la Concorde (1836) (ဓါတ်ပုံ မရငတ)
Révolution Française ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး လှိုင်းဂယက်တွေအပြီး ၁၇၉၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက် မနက်ကြီး လေးနာရီမှာ ဒီကနေ့ Place de la Concorde လို့ အမည်တွင်တဲ့ ကွန်းကော့ဒ် ကျောက်တိုင်ရှိနေရာ Place de la Révolution ရင်ပြင်ကြီးမှာ နာမည်ကျော် Guillotine ခေါင်းဖြတ် စက်ကြီးနဲ့ မာရီ အန်တွမ်းနက် ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊ သူမရဲ့ ယောက်ျား လူဝီ ၁၆ ဘုရင် ကိုတော့ ဂျန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့မှာကတည်းက ခေါင်းဖြတ်သတ်ပြီးပြီမို့ သူမရဲ့ နောက်ဆုံးနေဝင်ခါနီး အချိန် ကိုးလလောက်မှာ စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ နေသွားရမယ် ဆိုတာကတော့ အသေအချာပါ။
သူမ ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ အဲဒီ စကားတခွန်းကတော့ အခုထိတိုင် ကမ္ဘာကျော်နေဆဲပါ၊
S’ils n’ont pas de Pain, Qu’ils mangent de la Brioche (Let them eat Cake) . . .. .. …. ..
ဒါပေမယ့် . . . . … . . . . . .. …. .. ….. …. . . . .. ……. . . …….. . . . …….. . . …. . . …. ……
မာရီ အန်တွမ်းနက် ပေါင်မုန့်စားဖို့ပြောခဲ့လေသလား ကိတ်မုန့်စားဖို့ပြောခဲ့လေသလား၊ မင်းသမီးက ဘာပြောခဲ့ ပြောခဲ့ မောင်ရင်ငတေ သိပ်ပြီးတော့ စိတ်မဝင်စားလှပါဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ရာကျော် ကာလက အိမ်တွင်းပုန်း အဆင့်သာသာသာရှိတဲ့ မင်းသမီးတယောက် ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စကားမျိုး စကားလုံးတွေကို ဒီကနေ့ မောင်ရင်ငတေတို့ အင်တာနက်ခေတ်ကာလကြီးမှာ ပြောနေကြသူများရဲ့ အသံတွေ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကို ကြားယောင်မိရင်း မာရီအန်တွမ်းနက်လွန် အနှစ် ၂၂၂ အထိမ်းအမှတ် မှတ်တမ်း တခုကိုသာ ရေးသားတင်ပြ လိုက်ရခြင်းပါ။
မှတ်ချက် ။ ။။။ ပြင်သစ်အမည်များကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် စာလုံးပေါင်းရာတွင် မှန်ကန်အောင် ပေါင်းနိုင်ဖို့က အတော်ကို ခက်ခဲပါတယ်၊ Marie-Antoinette ကို မာရီ အောန်တွမ်းနက် သို့မဟုတ် မာရီ အန်တွမ်းနက်ဆိုပြီး အနီးကပ်ဆုံး စာလုံးပေါင်း လိုက်ပါတယ်၊